စိုးထွဋ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(စိုးထွဋ် (ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး) မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ – ယနေ့ထိ
၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ – ၁၁ ​မေ ၂၀၂၁
(၁၉၆၀-0၃-၂၉) မတ် ၂၉၊ ၁၉၆၀ (အသက် ၆၂)
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စည်သူ စိုးထွဋ် (၂၉ မတ် ၁၉၆၀ မွေးဖွား) သည် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်လည်း (၃)လကြာ တာဝန်ထမ်း​ဆောင်ခဲ့သည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အတွင်းရေးမှူး(၂) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး၏ ရဟတ်ယာဉ်မတော်တဆမှုတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သော ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၊ ဝန်ကြီး - ဗိုလ်မှူးချုပ် လွန်းမောင်၏ သားဖြစ်သည်။
ဗိုလ်သင်တန်း အပတ်စဉ် ၆၄ (OTS – 64) ဆင်းဖြစ်ပြီး အရှေ့ပိုင်းတိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့တွင်လည်းကောင်း၊ စစ်ဥပဒေချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း အဆင့်ဆင့် အမှုထမ်းခဲ့သည်။၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) အမှတ် (၆) စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူးနှင့် တပ်မတော်စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေး (စရဖ) အရာရှိချုပ်အဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအဖြစ်မှ အနားယူသွားသည့်အခါ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်ကို ခန့်အပ်လိုကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်). "အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၁)" (in မြန်မာဘာသာ) (PDF). ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြန်တမ်းစာစောင် အတွဲ(၇၄) (အမှတ်(၅၁)): စာ-၂၅၉. ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်. Retrieved on ၂၀၂၁-၀၉-၂၉.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအဖြစ် လက်ရှိ စရဖအရာရှိချုပ်ကို သမ္မတက အမည်စာရင်းတင် (in my)။
↑ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာ (in en)။[လင့်ခ်သေ]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စိုးထွဋ်&oldid=742071" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၀၁:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။